yezitolo Online eminyakeni yamuva is kuyanda ezingasho. sisikhulu phakathi bakithi kukhona izingubo nezicathulo, ithengwa ezitolo British. Abaningi abesifazane lapha olusha ikhabethe ukuba kungabi yiwo wodwa kodwa futhi izingane zabo nabayeni. Futhi ukuqeda ukuthenga kuyayithokozisa kuphela, odinga ukukwazi ukuxoxa Russian futhi British waphi emasayizi.
Ukuze wenze iphutha, kubalulekile ukukala usayizi unyawo. Ngenxa yale njongo kubalulekile ukuze ingalo umugqa bese ulinamathisela unyawo. Usayizi lichazwa ngokuthi ibanga esiphezulu phakathi nephuzu esithendeni futhi iningi umunwe ophumile. Le datha kuzokuvumela ukuqhathanisa Russian futhi British waphi emasayizi.
ERussia, njengoba zisebenzisa iyunithi yokukala esetshenziswa amamilimitha angu, okuyinto for the lula amakhasimende ngokuvamile ukuhumusha ukuze ngamasentimitha. ENgilandi, abakhiqizi zisebenzisa amayintshi. Kulokhu, i-zero usayizi esithathwayo we obuphelele ngezinyawo, okuvame ukuhlotshiswa ngayo umntwana osanda kuzalwa. Ngokusho idatha Ngokwesilinganiso, bangamaphesenti 4 amayintshi. Ukuze uthole ubukhulu elandelayo, kubalulekile ukuze ungeze zangaphambilini 1/3 intshi noma 8.5 mm. Ukwazi lokhu, ungakwazi kalula correlate Russian futhi British waphi emasayizi.
Ukuze kube lula abasebenzisi yakhiwa amatafula ekhethekile, okukuvumela ukucacisa ubukhulu izicathulo isiNgisi, kusukela ubude unyawo. Lokhu lula kakhulu izicathulo Ukukhetha ukulandelana noma izimbadada.
Kuyaphawuleka ukuthi ubukhulu izicathulo izingane British sika zihlukile kubantu abadala noma ngisho nentsha ingafaneleki. Ngakho-ke, uma unquma ukuthenga izicathulo ngoba indodakazi yakhe eneminyaka emithathu ubudala, okahle kakhulu we obuphelele ngezinyawo, kunokuba ukubaluleka ibalwa. Ngakho, uma esinqeni amantombazane yakho kuyoba 15 cm, uzodinga ukuthenga usayizi 7. ngeke silingane ngezinyawo, ilingana 265 mm ukuze izicathulo zabesifazane. Uma ngesikhathi sokuthenga uthanda uhlelo shtihmassovuyu, kulesibonelo lokuqala amateki zezingane kuziwa usayizi 24, kanti eyesibili - ngobude unyawo 40. Nokho, kulesi simo kuyoba indlela eziqinile ukukhetha yebhangqa efanelekayo.
Kufanele kuqashelwe ukuthi le British waphi emasayizi ezivela abakhiqizi ezahlukene ingase ihluke kancane. Kuleso simo, uma uthenge izimbadada omunye brand owaziwa, kanye pair of ephelele "wayehamba" ngaphambi kokuthenga izicathulo wenye inkampani, kuyinto efiselekayo ukuphinde ngifundelwe ithebula ntathu. Kaningi, kungase kube ukuhluka okuncane ubukhulu, khona okungase yokuthi izicathulo ezintsha uzothola nawe Shake kancane noma awe phansi ngenyawo zakhe.
ukunakekela okukhethekile unikezwa ukugcwala imilenze. Kuyaziwa, kungaba ezihlukahlukene kakhulu. Abesifazane abaningi, eyanqunywa imilenze sasivumela ephelele, uyeke ukuthenga nge-inthanethi ngenxa yokuthi kukhona kungenzeka ukuthi izimbadada omusha ayifanele ukuphelela. Ngakho manene kangcono ukuba ayiyeke le kumasevisi we-intanethi futhi uthenge pair oluthandayo kuphela ngemva kufaneleka ngokucophelela. Kusukela namuhla ungakwazi ukuthenga izicathulo ezivela abakhiqizi ezahlukene ngaphandle kokushiya nokuzabalaza edolobheni lakubo.